We bought it - Saturngod
Posted on Updated January 31, 2013 July 21, 2011 by saturngod
မနေ့က Lion ထွက်လာပြီ။ Lion ထွက်လာတာ ထက် ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိတာတွေ သိလိုက်ရတယ်။ Lion download ချလိုက်ပြီလို့ ကြေငြာလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော် အပါအဝင် အခြား မြန်မာတွေကပါ ဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲ။ Warez Site တွေမှာ ရနိုင်တယ်။ Free ရနိုင်တယ်ဆိုတာကို သိရဲ့ နဲ့ ပိုက်ဆံပေပြီးတော့ကို သုံးတာ။ Lion ကို US $29.99 ဆိုတာက စလုံး S$ 36 လောက်ပဲ ရှိတယ်။ အရမ်းကို တန်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ ဝယ်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ တကယ်လည်း ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီး ဒုက္ခခံပြီး download ဆွဲချရတာတောင် ဝယ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော ဒါက ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာတွေပဲ။ ခိုးသုံးတာထက် တန်တယ်ထင်တဲ့ အရာကို အစစ် အမှန် ဝယ်သုံးရတာ ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာ ပစ္စည်းတန်ဖိုးအပြင် လူ့တန်ဖိုးပါ ပိုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မနေ့ညက Lion ဝယ်မလို့ ပြင်ပြီးကာမှ June6နောက်ပိုင်း Mac book pro ဝယ်ထားတာကို သတိရတော့ ရက်ကို ကြည့်မိလိုက်တယ်။ June9က ဝယ်ထားတော့ Free ရမှာ သေချာတာနဲ့ online မှာ ရှာကြည့်လိုက်တော့ Apple က request program ကနေ Redeem code ယူလို့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ Lion ကို Free ရသွားတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက ခိုးကူးတာကို အားပေးလာပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့တွေ ရှက်တတ်လာတယ်။ ရှက်ရမှာကို သိလာတယ်။ ရှက်တတ်လာတယ်။ ရုံးမှာလည်း ဝယ်သုံးတယ်ဆိုတာကို ဂုဏ်ယူပြီး ပြောရဲလာတယ်။ ရုံးမှာ ခိုးသုံးတာကို မကြိုက်ကြသလို ခိုးသုံးတယ်ဆိုတာကိုလည်း ရှက်စရာလို့ မြင်တယ်။ software ခိုးသုံးရင်လည်း မလုံမလဲနဲ့ ငါခိုးသုံးထားတာဆိုပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ ပြောကြတယ်။ ကျွန်တော် အပါအဝင်ပေါ့။ TextMate ကို ဒီနေ့ ဝယ်မလို့ ကြည့်လိုက်တော့ S$70 လောက် ဖြစ်နေတာနဲ့ textmate2ထွက်လာအောင် စောင့်လိုက်အုံးမယ်လေ။ S$70 ကတော့ များလွန်းတယ်။ OS တစ်ခုလုံးတောင် S$36 လောက်ပဲ ရှိတာဆိုတော့ S$70 တန် software ဝယ်ဖို့က စဉ်းစားရအုံးမယ်။ Adobe software ကတော့ တော်ရုံတန်ရုံ ဘယ်သူမှ ဝယ်မသုံးနိုင်ပါဘူး။ Adobe ကလည်း ဈေးချဖို့ အစီအစဉ်ရှိတဲ့ ပုံမပေါ်ပါဘူးလေ။
Lion ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်က တစ်ယောက် နှစ်ယောက်လောက်ပဲ ဝယ်မယ်ထင်ခဲ့ပေမယ့် ဝယ်လို့ရတဲ့ လူ တော်တော်များများ ဝယ်သုံးခဲ့တယ်။ App Store ကနေ download ချရတာ ကြာလို့ App Store မှာ ဝယ်ပြီးတော့ Warez Site ကနေ download ဆွဲချတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခိုးသုံးဖို့ အခွင့်အရေးတွေရှိတာတောင် ကျွန်တော် တို့တွေ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ ရုံးမှာလည်း ကျွန်တော် Free ရထားတဲ့ Lion ကို ယူလိုက်ရင် ရပေမယ့် $36 ဆိုတာ တန်ပါတယ်ဆိုပြီး ဝယ်ကြတာပဲ။ အဲ .. ရုံးမှာတော့ မြန်မာတွေ မရှိဘူး။ ဝယ်သုံးတယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူစရာ ခိုးသုံးတယ်ဆိုတာ ရှက်စရာ ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ သိလာပါပြီဗျာ။ သို့ပေမယ့်လည်း Adobe product ဝယ်သုံးဖို့ကတော့ ဟိုးအဝေးကြီးမှာ ရှိနေပါသေးတယ်ဗျာ။
« Review myself Copyright »
Ko Saturn, I would like to know, we call install zawgyi on Lion 7, If yes, where can I find and download that, please let me show Ko Saturn. Thank for everything.
I can use zawgyi and unicode. Myanmar MN unicode font include in Lion. So, if you want to use zawgyi , you need to change setting in Safari.
Hello Ko Saturn, Thank you for reply. I really don’t know how to change setting in Safari? If you don’t mind please tell me Ko Saturn. Thank you very much, I am start to using Apple Mac. Thank you
you can change from Safari > Preference … > Apperance
Still not get Zawgyi font setup yet. Please tell us step by step. Zawgyi font is not properly display in OSX lion safari and mail. Please help us. Thanks.
Pyae Sone Tun says:
I live in YGN and I also bought from Mac App Store. Welcome to the jungle…
Wow… amazing bro…
I also bought OSX Lion and upgraded already. 🙂
Han thein says:
ခိုးတဲ့အကြောင်းတွေကြီး ပြောလွန်းတော့- ခိုးတာတွေ ရှောင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ သူခိုးဇော်ဂျီကို နှစ်ပေါင်းများစွာ စုံမက်တော့ သူခိုးဇော်ဂျီလုပ်ရပ်တွေ ယခုတော့နာကြီး မှာပေါ့နော်။
ဝယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ MICT ထဲကနေ သြွးဆွဲလိုက်တယ်။ ပြီးရော 😀
Yep we did it we bought it! Didn’t notice FOC for Mac Users purchased after June 6. I was trying to buy it but apple didn’t chargeacoin.
Many Thanks for the keyboard between.
Yes….. I’m one-sided apple fan and Steve Jobs is the person I admire most. Lion only cost 30$ and i assume that it’s really worth to buy…so, i bought iTunes gift card with 1000 kyats for 1 dollar(actually exchange rate is only about 790). As you know, myanmar connection is really slow. So, among many difficulties, i download Lion for continuous3days ( 72 hours ) (during download, i had to resume again and again) … Finally I Got It…. I’m really satisfied inside in mind and i’m really pleased myself to buy and use genuine version. 😀
i can’t find my comment which i semt yesterday..
I didn’t receive any comment in pending and Spam. I approve all of the comment and didn’t delete. If you sent around 22 July, i couldn’t receive because it was moving server time.
Chit YAN TOE says:
I bought Lion OS in National CD shop with K1000. I want to buy from Apple Store.But I have so much money……I am sad..
I bought mac book pro 19July in myanmar.Can I get Redeem Code to upgrade Lion?
Sorry! Wrong date.I bought it on 19 August not July. Please reply me. 🙂
Yes, you can. First, need to register your mac book on apple.com. After that , you can request redeem from http://www.apple.com/macosx/uptodate/
billing & shipping form မှာ credit card no.တွေဖြည့်ခိုင်းနေတယ်အစ်ကို။ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ ပြောပြပါဦး။
Redeem code ရ ပြီးပြီလား မသိဘူး ?
Redeem Code ကို ဘယ်လိုယူရလဲခင်ဗျာ … Place of purchase တို့ City, State တို့ကို မသိဘူးဖြစ်နေတယ် … ကူညီပေးပါဦးခင်ဗျာ …
ဝယ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကို ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံက ဝယ်တယ်ဆိုရင် ဝယ်တဲ့ ဆိုင်ကို ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
Dear Ko Saturn,
I want to type in Myanmar on iMac, but I don’t want to use built in unicode keyboard. I want to use Zawgyi keyboard. I’ve install your KMZ.pkg.
If you don’t mind, please tell me step by step “how to do”.
i want to known lion os installion.please send me installion about at gmail. my gmail address is
mac app store ကနေ ဝယ်ပြီး download ချတယ်။ ပြီးတော့ next , next နဲ့ သွားပြီး သူ့ဘာသာ သွင်းသွားတာပဲ။ ဘာ အဆင့်လိုသေးလို့လဲ ခင်ဗျ။